Isitayile saseGeorgian Stable Yard Studio Apartment
Indawo yestudio ene-rustic, yeli xesha langoku kunye nenhle ezinzileyo, ebikade isebenza njengendawo enkulu ezinzileyo kodwa ngoku isebenza njengendawo enkulu egcwele isibane esinophahla oluphezulu kunye ne-mezzanine kunye nendawo yomlilo evulekileyo. Ujonge kwelinye icala iProvence ephefumlelwe ukukhanya egcwele igadi yentendelezo kwaye enye ijonge kwigadi yasekhitshini ebiyelwe ngodonga ebonelela zonke imveliso kwindawo yokutyela eGreen Barn, zonke zingqongwe ziigadi ezichumileyo zeBurtown House & Gardens ikhaya lethu losapho ukusukela ngo-1710.
Oku kungabhukishwa kunye nendlu yethu yeyadi yokulala eyi-3 ezinzileyo yokulala ukuya kuthi ga kwi-8. Le ndlu yesitudiyo ilungele ukuhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide, ibekwe phakathi kweehektare ezili-12 zeentyatyambo, ihlathi kunye neegadi zasekhitshini, ezineepaki eziqingqiweyo kunye nokuhamba kwamadlelo kunye neBurtown House a. Ngo-1710 iVilla yaseGeorgia eyakhiwe ngamaQuaker kwaye ingazange ithengiswe, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuza ubaleke, uphumle, ukhuthaze, uphumle kwaye utye eyona mveliso intsha yamaxesha onyaka ethe yahanjiswa kwindawo yethu yokutyela iGreen Barn.
Iindwendwe nazo zikwazi ukufikelela simahla kwiigadi ze-24/7. Ibhedi enkulu enepowusta ethokomeleyo enkulu ibekwe kwindawo ephambili yokuhlala yesilingi ephezulu. Kukho izinyuko zekhonkrithi ezikhazimlisiweyo ezikhokelela kwindawo ye-mezzanine enendawo yomlilo esebenzayo, i-sofa kunye nesitulo sengalo esilungele ukufunda nokuphumla. Indawo izele ziifoto ezinkulu ezithathwe nguJames kunye neeshelufu ezinkulu ezihlala ingqokelela yeemagazini zangaphakathi kunye nefashoni - le yayikade iyistudiyo sokufota. Kukho iimfama ezinkulu zokulawula ukukhanya kunye nokwenza indawo yabucala.
Kukho igumbi lokuhlambela elineshawa enamandla. Nangona kungekho khitshi kukho ifriji, itoaster, iketile kunye nomatshini weNespresso. I-Brunch ihanjiswa ukusuka ngoLwesithathu-ngeCawa kwindawo yethu yokutyela yaseGreen Barn ekwelinye icala legadi yethu yasekhitshini ebiyelwe ngodonga,
Kukho ithala elijonge emazantsi eligcwele ilanga lokutyela ngaphandle ukuba ilanga liphumile.
Iyure enye ukusuka eDublin kwaye uphuma nje kuhola wendlela, ujikelezwe ziihektare ezili-12 zegadi kunye nekhaya lethu losapho ukusukela ngo-1710, indlu endala yamaQuaker, njengoko ingazange ithengiswe igcina ihlabathi elidala lokwenyani, siyayithanda kakhulu ukutya kwaye ke sinendawo yokutyela iGreen Barn kwizitiya zethu ezibonelela ngemveliso yezinto eziphilayo zonyaka.
Iindawo zangaphakathi ziyilwe nguJames umfoti wangaphakathi kunye noJoanna umyili kunye nompheki bayilwe ngezona nkcukacha ziphezulu kunye nenkangeleko epholileyo kodwa enesitayile.
Beka phakathi kweegadi ezintle, imijelo, umhlaba wemithi kunye nefama esebenzayo egxininisa kakhulu kwimveliso yokutya okuphilayo kunye neendawo ezintle ezisingqongileyo.
Kuhlala kukho phantse amalungu osapho kwipropathi ngexesha elithile phakathi kwendlu enkulu ekumgama weemitha ezili-100, okanye kwindlu kaLesley Fennell ekwelinye icala lentendelezo.
Kukwakho nabasebenzi kwi barn eluhlaza kunye nabasebenzi basefama. Indawo ayikhe ishiywe.
Kuhlala kukho phantse amalungu osapho kwipropathi ngexesha elithile phakathi kwendlu enkulu ekumgama weemitha ezili-100, okanye kwindlu kaLesley Fennell ekwelinye icala lentendelez…